Kedu ndị bụ isi ihe na-ekpebi nchọpụta isiokwu dị na Amazon?
Echere m na ịmepụta nyocha ọ bụla dị na Amazon na-emekarị ka ọ bụrụ ihe ndị dị mkpa nke isiokwu (dịka o si kwekọọ na nchọta ọchụchọ nke onye ọrụ), na ọkwa asọmpi dị ugbu a (lee ka ọ ga - esi sie ike ịkwado ya). O nwere ike iyi ka ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, ma isi ihe mgbaru ọsọ nke nchọpụta isiokwu dị na Amazon bụ ịchọpụta ndị nwere ike imeri ma ka na-enwebeghị ihe ndị a na-achọpụta ngwa ngwa na ọdụ ogologo oge nke ndị ahịa na-azụ ahịa na-azụ n'ebe ahụ. Ma olee otu esi eme ka ọganihu dị nro dị mfe ka nchịkọta ndepụta nke ngwaahịa gị dị ka hell?
E nwere ụzọ dị iche iche ị ga - esi nweta ya:
(8. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ọ bụghị naanị n'otu ntabi anya ka ịchọta nnukwu foto nke mkpokọta isiokwu dị oke ọnụ nke metụtara ngwaahịa ma ọ̄ bụ ihe ụfọdụ dị iche iche, ma ghọta ihe ọchụchọ ọchụchọ na ndị na-azụ ahịa n'ógbè ahụ ga-ewere ya maka nchọpụta ngwaahịa ha mgbe e gosipụtara ha onwe-atụ aro nhọrọ site Amazon ama algorithm.
Ịmepụta mkpụrụokwu ndị kachasị emetụ egwu. M na-ekwu okwu ọchụchọ ndị ahụ dị elu, ma ka na-asọ mpi dị ala. Nke a bụ ma eleghị anya, ọ ka nwere ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ngwaahịa ndị metụtara ya bụ ndị a na-ahazi maka isiokwu ahụ kpọmkwem maka ugbu a. N'ihi ya, ndị a na-adịghị elelị ma ka na-emecha nyocha na njikọta ọdụ ogologo nwere ike ịghọ nọmba gị otu ihe kacha mkpa maka nchọpụta isiokwu na Amazon.
Ịchọta okwu ederede na-emekarị ugbu a na-ewu ewu. N'ikwu ya n'ozuzu, okwu okwu ndị na-ewu ewu anaghị adị oke egwu, ọ dịkarịa ala maka oge. Ma uru ha kachasị ọhụrụ na olu ọchụchọ (dịka ọmụmaatụ, site na ọnwa gara aga) mee ka ha maaa anya ka a na-atụle ha n'etiti ihe mgbaru ọsọ mbụ nke isiokwu ọchụchọ gị na Amazon.
Tinyere okwu okwu bara uru na ngwaahịa ogologo oge ọchụchọ nchịkọta, njirimara ndepụta nke aka gị na njikarịcha ya bụ ihe dị mkpa. Echere m na ịnweta akwukwo isiokwu bara uru dị mma maka gị. Ma ịzụta na-enweghị atụmatụ ziri ezi nke nchịkọta ndepụta nke ngwaahịa ga-egbu egbu gị ahịa azụmahịa karịa oge. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jide n'aka na ọ dịghị ihe ga-eme ka ndepụta gị dị na ntanetị. N'ịme nke ahụ, ana m atụ aro ka ịchọta ọnụọgụ abụọ na ihe ndị na-esonụ na-achọpụta ihe ịga nke ọma na ntinye aha na Amazon:
A ga-edepụta nkọwa ahụ n'ime ebe dị 250 okwu ga-akwado ya na ndepụta ise isi okwu, onye ọ bụla na-akọwa nkọwa zuru oke ma dị ọcha.
Ihe oyiyi ngwaahịa di ezigbo mkpa. Na ọ bụghị naanị iji duzie ndị ọbịa gị na mkpebi ikpe ikpeazụ ịzụrụ gị, mana maka atụmatụ nchịkọta ọchụchọ. Ihe bụ na Amazon na-enyocha ihe ntanetị anya nke na-akwado nkwado dịka ihe dị mkpa na-ekpebi njirimara ngwaahịa gị Source .